A Dụọla Ụmụakwụkwọ Ka Ha Dị Njìkere Tupuu Chọba Ohere Ọrụ
A kpọkuola ụmụakwụkwọ ka ha na-ejikere onwe ha nke ọma ma hụkwa na ha nwezuru ihe niile a chọrọ, tupuu ha amalite ịchọ ọrụ ma ọ bụ itinye akwụkwọ ka e wee ha n'ohere ọrụ.
Nnukwu onye nkuzi n'ihe gbasaara ọmụmụ ọrụ oyibo na mahadum Nnamdị Azikiwe, bụ ọkammụta Ngọzị Ewuim nyere ndụmọdụ a na nkuzi pụrụ iche o nyere na nnukwu ọgbakọ a chịkọbara site n'aka ndị isi otu jikọtara ụmụ akwụkwọ nọ na ngalaba ọmụmụ ihe ọrụ oyibo bụ Public Administration na mahadum ahụ.
Na nkụzi ya n'ọgbakọ ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ezumezu nke isi ngalaba Management Sciences n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ọkammụta Ewuim kpọpụtasịrị ma kọwaa n'ebe o doro anya, ihe dị iche nwata akwụkwọ mahadum ma ọ bụ onye ọbụla na-achọ ọrụ kwesiri ịma na otu o siri kwesi ịhazi onwe ya tupuu ọ malite itinye akwụkwọ ka e wee ya n'ọrụ, iji hụ na o nwetara ọrụ ahụ na-agbanyeghị mmadụ ole tinyere akwụkwọ ka e wekwa ha na ya.
O mere ka a mara na ohere ọrụ pere mpe mana ndị na-achọ ọrụ bụ imirikiti, ma sị na ọ bụ otu onye siri hazie onwe ya na ozi achọm ọrụ ya pụrụ ime ka a họrọ ma wee ya n'ọrụ ahụ n'ime ndị ọzọ tinyekwara akwụkwọ.
Na ntụnye nke ya, onye nkuzi ọzọ sitekwara ngalaba ọmụmụ ihe ahụ, bụ maazị Kenneth Iloanya kọwaara ụmụakwụkwọ ahụ na ihe kacha dị mkpa mmadụ ọbụla na-achọ ọrụ ga-ejidesi ike bụ ugwù ya na ịgụsi akwụkwọ ike maka na onye ọbụla nwere ugwu ma marakwa ihe ọ gụrụ enweelarị ọtụtụ ihe o jiri karịa ndị ogbo ya n'ebe inweta ohere ọrụ dị, ọ kachasị onye ahụ marakwuzie hazie ozi achọm ọrụ ya nke ọma dịka e nyere na nkuzi. Ọ kpụkuzikwara ụmụakwụkwọ ka ha dị uchu na agụmakwụkwọ ha ma dụọ ha ka ha werekwa ohere ọbụla ha nwetara wee chọọ obere ihe ha ga na-eme ma ọ bụ ọrụ aka ha ga-amụ maka na ọrụ oyibo kọzịkwara ụkọ n'ala anyị ugbu a.
Na mbụ n'ozi nnọọ ya, onyeisi otu ahụ jikọtara ụmụ akwụkwọ ahụ, bụ nke a maara dịka NAPAS n'aha mkpirisi, bụ maazị Izuka Christian kwuru na ebumnobi mmemme ahụ bụ iji mepee anya ụmụakwụkwọ banyere ihe dị iche iche ha kwesiri ịma dịka o siri metụta ịkwado onwe ha maka ọrụ, ọ kachasị ma ha gụchaa pụọ. O kwuru na ọgbakọ ahụ bụ otu n'ime atụmatụ dị iche iche ọchịchị ya wepụtara maka imerube izu ụka ụmụakwụkwọ nke ahọ a bụ 2018, ma kpọkuo ụmụakwụkwọ ibe ya ka ha were ohere ahụ wee mụta ihe ndị ahụ dị oke mkpa, bụkwa nke ha apụghị ịmụta n'ebe ọzọ ngwa ngwa ha hapụrụ mahadum baa n'ime ụwa.
Ọgbakọ ahụ bụ nke weere ọnọdụ mkpụrụ ụbọchị atọ, bụ nke a nọrọ n'abalị nke abụọ ya wee kụziere ụmụakwụkwọ ahụ ọrụ aka na otu e si emepụtasị ihe dị iche iche dịka nchà, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ebe abalị nke atọ bụzịkwa nke a nọrọ na ya wee nabata n'ụzọ pụrụ iche ụmụakwụkwọ ndị nwetara ohere ịgụ akwụkwọ na ngalaba ahụ, bụkwa ndị nọ n'ogo nke mbụ ha.
Mmemme nnabata ahụ bụkwa nke dọtara onyeisi ngalaba ọmụmụ ihe ahụ, bụ Ọkammụta F.C Agbọdike, ndị nkuzi ndị ọzọ, nke gụnyere dọkịnta Rosemary Anazodo, Oriakụ Chndịebere Nebo na ọtụtụ ndị ọzọ.
A nọkwazịrị na ya bụ mmemme wee too ndị ndu otu ahụ na Mahadum Unizik, nke gụnyere nwaada Igboegwu Azọm (osote onyeisi); Izunna Okafọr (ode akwụkwọ); Ngwube Patrick (odekọ ego); Mụọdịmma Cynthia (ojide ego) na ndị ọrụ ha ndị ọzọ.